Manazava ny fomba hahazoana tatitra azo antoka momba ny Google Analytics i Semalt
Azo antoka ny filazana fa isika rehetra dia maniry fifamoivoizana marina sy marina ao amin'ny tranokalantsika ary ny tatitra momba ny Google Analytics azo antoka ihany. Misy fomba maro ahafahana manao izany. Raha mampiasa adiresy IP ianao dia afaka mamorona mora foana ny angon-drakitrao amin'ny fanarahana an'ity torolalana ity. Eto i Ross Barber, Semalt Tomponandraikitra amin'ny Success Successor, dia hilaza aminao ny fomba fampiasana ny solosaina adiresy IP raha tsy misy ny fifamoivoizana ivelany avy amin'ny fifamoivoizana anatiny ao amin'ny Google Analytics.
Ny Pros sy ny Tsinin'ny IP Adiresy Filaharana
Voalohany indrindra, tokony ho fantatsika ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny sivana adiresy IP. Google Analytics dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaraha-maso ny mety sy ny fahasarotan'ny mpanjifanao ary ny fomba ifandraisan'ireo mpampiasa amin'ny pejy Internet anao. Raha toa ka misy mpitsidika avy any ivelany sy anatiny ny tatitra fanadihadiana, dia sarotra aminao ny manavaka azy ireo. Saingy tsy misy zavatra tokony hatahoranao mikasika ny fahafahanao hampiato ny Google Analytics anao amin'ny famantarana sy ny fanaraha-maso ny fitsidihana anatiny sy ivelany. Azo atao izany rehefa mamorona lisitra isan-karazany ary mametraka ny IP rehetra any. Tokony hotadidinao fa ny sivana adiresy IP dia tsy mitranga raha tsy mampiasa adiresy IP ianao. Adiresy IP iray no tsy afaka ovaina. Ity dia efa zatra hahafantatra ny maha-azo antoka ny tranokalanao sy ny antontan'isa momba ny analytics..Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mila mpandefa lisitra ao amin'ny aterineto, noho izany dia afaka mampiasa adiresy adiresy IP izy ireo, izay azo ovaina, novaina na novaina tamin'ny fotoana. Avelao aho hilaza aminareo fa ny adiresy IP dia tsy hiaraka aminao mihitsy, izay midika fa tsy maintsy mampifandray azy ianao isaky ny mifandray amin'ny fifandraisana Wi-Fi. Ireo hetsika rehetra ireo dia hosoratana ao amin'ny Google Analytics automatique.
Mamorona filtre IP amin'ny Google Analytics
Mba hamoronana ny adiresy IP adiresy, dia mila mahafantatra ny zava-drehetra momba ny IP ianao na manokana ianao. Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hanaovana izany dia amin'ny fahafantarana ny karazana IP azo ekena amin'ny Google. Raha vao mahazo ny valin'ity fanontaniana ity ianao, dia ho mora aminao ny mamorona sivana amin'ny tranokalanao ao amin'ny Google Analytics. Voalohany indrindra, tokony hanokatra ny kaonty Google Analytics ianao ary misafidy ny tranonkalanao izay tianao hamoronana filters. Ny dingana manaraka dia ny hanokatra ny safidy ekena ary tsindrio ny sokajy fanivanana. Afaka miditra ao amin'ny adiresy IP ianao ary mampihatra ny sivana amin'ny sehatra sasantsasany. Ankehitriny dia mila mamonjy ny fanovana ianao ary manakana ny fifamoivoizana anatiny tsy hifangaro amin'ny fifamoivoizana any ivelany amin'ny data Google Analytics.
fomba fanao mahazatra amin'ny fandefasana adiresy IP
Raha tsy azonao ny fomba fiasa voalaza etsy ambony, dia azonao ampiasaina fomba fanao hafa hanivanana ny adiresy IP anao. MonsterInsights dia mamela anao hahazo fidirana amin'ny karazan-tsivana marobe. Azonao atao ny mifidy sy manetsa ny sivana amin'ny safidinao mba hijerena ny IP amin'ny tranonkalanao. Ny tokony hataonao dia ny mamaritra ny anjara toeran'ny mpampiasa rehetra ary ny manajanona ny Google Analytics tsy hanaraka ny asany mandritra ny andro vitsivitsy. Amin'ny fampiasana ity fitaovana ity, dia afaka mahita fifandraisana bebe kokoa sy mpampiasa marobe ao amin'ny tranokalanao ianao, ary mora ny manara-maso ny anjara asany sy ny fitondrantenany ary ny fifandraisany amin'ny pejy web anao Source .